Dooda kadhalatay muqaalka Askarigii ESTV lagaga Hadliyay!? | ogaden24
Dooda kadhalatay muqaalka Askarigii ESTV lagaga Hadliyay!?
Sep 8, 2018 - Aragtiyood
Tobankii sano ee lasoo dhaafay Barnaamijyadii iyo Muuqaaladii Tv-gaa (Es-Tv) ka baxay ma’ahayn ujeedkoodu in lagula dagaalamo aragti siyaasadeed iyo urur mucaarad ah ama xittaa in lagu difaaco aragti kale oo siyaasadeed.
Waxay barnaamijyadaasi ahaayeen duullaan-wayn oo lagu qaaday qiyamka iyo karaamada dadka Soomaali-Muslimka ah ee ku hoos dulman xukunka qallooca ku dhisan ee Itoobiya.
Waxay ahaayeen weeraro maskaxeed oo maalinle ah. Wuxuu qorshuhu ahaa in xilliga ugu gaaban iyo qiimaha ugu yar lagu gaadho hadafka-wayn ee isticmaarka oo ahaa bur-burinta diinta, dhaqanka iyo Akhlaaqada dadkan Soomaali-Muslimka ah.
Bal Sawiro toban sano oo maalin iyo habeen caruurtaadu fiirsanayso farriin dowladoodii ka timid laakiin fisqi, fasahaad, nacayb, ceebayn iyo bahdilaad ka buuxo.
Maalintii uu mashruucu billowday ilmihii 5 jir ahaa maanta waa 15 jir, Kii 10 jir ahaa maanta waa 20 jir, kii 15 jir ahaa maanta waa 25 jir, Kii 20 jir ahaana maanta waa 30 jir ahna Wasiir, xildhibaan ama Macallin. Iswaydii dhaawaca bulsho ahaan innasoo gaadhay baaxaddiisa? Kadibna ka feker nooca xalka een u baahantahay iyo qiimaha uu innagu joogo.
Xalka uma arko inay maanta laba wiil oo yar-yar iyo labaatan waawayn midna noosoo fadhiistaan isla Tv-gii oo innooga sheekeeyaan edeb-darro, anshax-darro iyo arxan-darro wixii ay dadka ku faleen.
Xalku wuxuu igula habboon-yahay in wixii dhacay loosaaro guddi ay hoggaaminayaan dad khubaro ah oo soo baadha; wixii dhacay, siday u dheceen, ciddii ka masuulka ahayd iyo sida ugu wanaagsan ee loo xallin-karo.
Madaxwaynaha cusub – Mustafa Omer – ma qabo inuu damiir ahaan aqbali-doono mashruucan laakiin waxaan uga baqayaa inuu cadaadiska uga imanaya xoogagga isbeddel-diidka ah awgii khaladkan ugu simbiririxdo.
FG: Xusuusnow inaan weli gacantii isticmaarka kujiro iyo in waddanka siyaaasaddisii lagu dhaqayo weli.
By: Ismaciil Cali